A Guide Full on Sida loo hagaagsan iPhone la iCloud
1. nidaameed iPhone la Lugood
1.1 nidaameed Music
1.2 nidaameed Photo
1.3 nidaameed Video
1.4 nidaameed App
1.5 Xiriirada nidaameed
2. nidaameed iPhone in Computer
2.1 nidaameed iPhone la PC
2.2 nidaameed iPhone la Mac
3. nidaameed iPhone la Account
3.1 nidaameed iPhone la Google
3.2 nidaameed iPhone la Muuqaalka
3.3 nidaameed iPhone la Facebook
3.4 nidaameed iPhone la Yahoo!
3.5 nidaameed iPhone la iCloud
3.6 nidaameed iPhone la Thunderbird
4. nidaameed iPhone la Device
4.1 nidaameed iPhone la Android
4.2 nidaameed iPhone la iPad
4.3 nidaameed iPhone la iPod
5. nidaameed iPhone si Car
iCloud, sameeyo Apple, waxay bixisaa online ah u isticmaala Apple si hagaagsan xogta si daruurtii kaydinta. Iyadoo ID ah isla Apple, aad leedahay fududahay in mar walba xogta iyo meel kasta oo ay helaan. Haddii aad tahay qof user iPhone ah, aad rabto in laga yaabo inay ogaadaan sidii ay u hagaagsan iPhone la iCloud. Halkan, ee qodobkan, waxaan jeclaan lahaa inaan si ay u muujiyaan in aad talaabo talaabo ah.
Talaabooyinka Easy in ay u hagaagsan iPhone in iCloud
Tallaabada 1. Laga soo bilaabo screen Home ah, tag Settings dooro iCloud.
Tallaabada 2. Dooro Account oo geli ID Apple iyo password aad. Haddii aanad haysan ID Apple aad ka dibna aad leedahay si aad u abuuro ka dibna aad kala saxiixday doonaa.
Tallaabada 3. Hadda dhigay aad qorshe lagu kaydiyo iCloud. Markii ugu horraysay ee aad si toos ah aad u hesho lacag la'aan ah 5GB iCloud kaydinta taas oo ku filan marka aad u hagaagsan iPhone cusub iCloud. Waxaad kartaa cusboonaynta in 10GB, 20GB, ama 50GB ee kaydinta lacag sanadle ah .
Tallaabada 4. Taas ka dib, tuubada qabtay button. Waad ku soo laabtay goobaha iCloud.
Tallaabada 5. Deji aad fursadaha account iCloud Mail.
Cinwaanka e-mail iCloud u muuqataa hoose ee shaashadda Account ah.
Your iPhone u hagaagsan doono ay ka kooban tahay. By default Notes u hagaagsan ciyaari doonin ma loo leexanayo haddii ID Apple aad waa @ me.com amaicloud
Tallaabada 6. Hadda midowdo aad iPhone la iCloud. Tubada biiro kasta oo ay u noqon on ama iska iCloud .Wadashaqayntaas wixii macluumaad ah in.
Tusaale ahaan, si ay u hagaagsan aad Xiriirada u dhexeeya aad iPhone, Mac, iyo iPhone, ka jaftaa biiro in On. Si aad u dami syncing iCloud u xusuusinta, ka jaftaa Xusuusin ka bedesho Off. Photo Stream iyo Documents iyo Data leeyihiin screens gaar ah leh fursado badan.
Tallaabada 7. Hubi kaydinta iCloud
Waxaad la socon kartaa kaydinta iCloud raacaya tallaabooyinka soo socda:
Laga soo bilaabo screen Home ku, tuubada Settings icon.
Open Kaydinta & kaabta .
• Open Maamul Kaydinta.
Waxaad la socon doonaa meel ay isticmaalaan hayaan aad. Waxaad tirtiri kartaa hayaan u iPhone mar dambe ma aad isticmaasho haddii aad rabto in lagu badbaadiyo meel lagu kaydiyo iCloud.
• Optional: Waxa kale oo aad awood karo ama iCloud hayaan Disable xogta aad iPhone ee.
Marka laga reebo syncing iPhone in iCloud, waxaad kaloo sameyn kartaa gurmad iPhone in iCloud .
Dheeraad ah Reading: nidaameed iPhone badan WiFi
Waxaa jira habab badan kuwaas oo kaa caawin in aad u hagaagsan aad iPhone badan WiFi by kaliya xira iPhone la Wi-Fi Network. Waxaad si Lugood u hagaagsan kartaa iPhone si toos ah ama gacanta ka badan Wi-Fi. Waxaad dooran goobaha aad u Wi-Fi syncing si la mid ah sida aad u sameeyaa syncing badan cable ah.
Si on syncing Wi-Fi, aad iPhone u baahan yahay in lagugu xiro your computer. Marka syncing Wi-Fi rogman yahay, waa in aad u hagaagsan kartaa iPhone mar kasta waa ay ku shabakad isku Wi-Fi sida your computer.
Si on syncing WiFi:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone si aad u computer.
Tallaabada 2. Open Lugood. Under AALADAHA , guji si aad iPhone, ka dibna riix Kooban .
Tallaabada 3. Dooro nidaameed aad iPhone badan Wi-Fi.
Tallaabada 4. Barkinta aad iPhone ka your computer.
Tallaabada 5. Ka dib marka aad barkinta, aad iPhone sii wadaan in ay ka muuqan suuqa kala Lugood ah (hoos AALADAHA ), haddii aad riix tuurid button.
Haddii aad riix tuurid button, aad iPhone laga saaro suuqa kala Lugood ah, laakiin syncing Wi-Fi weli gagadin. Your iPhone reappears furmo Lugood marka dambe aad Lugood furo.
Copy Wax kasta ka iPhone in PC
A Best iPhone Transfer Software
1 Click to Demi ka iPhone in Android
1 Click si ay u gudbiyaan ka Android inay iPhone
Top 17 Apps u iPhone
3 Siyaabaha kaabta iPhone SMS
1 Click si ay u gudbiyaan BlackBerry si iPhone
1 Click to Demi Samsung si iPhone
1 Click to dhaqaaq iPhone in Samsung
1 Click to Copy Nokia si iPhone
A Guide Full in ay tirtirto iPhone
Sida loo Helo iPhone kaabta Location iyo Delete hayaan
11 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay iPhone kaabta la Lugood / iCloud
4 Hababka si iPhone Xiriirada kaabta la / aan Lugood
Saddex Siyaabaha Download kaabta iCloud Si fudud.
3 Siyaabo Sahlan ee Access iCloud
Sidee si ay u gudbiyaan iCloud Faylal ay si Android
Sida loo saar iCloud Account leh ama aan lahayn Password
Tallaabooyin sahlan in ay u hagaagsan iyo soo celinta aad iPhone la iCloud
Ma Apple ee 5 GB ee Free iCloud Kaydinta la tegtaan dalab Sharafbadanyahay?
iPad iCloud Tricks kaabta Waxaad dooneynin inuu u Miss
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan gurmad iCloud
Sida loo sameeyo iCloud Account on Your Android
Hab fudud oo loo maareeyo iCloud Xiriir
> Resource > iCloud > A Guide Full on Sida loo hagaagsan iPhone la iCloud